Ijoollee keenya jimmaarraa miilaan kaa'ani gara irrecha hora finfinnee imalaa turan irratti magaalaa tafkiitti dararaan maqaa alaabaatiin jalqabee jira Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIjoollee keenya jimmaarraa miilaan kaa’ani gara irrecha hora finfinnee imalaa turan irratti magaalaa tafkiitti dararaan maqaa alaabaatiin jalqabee jira
(SBO – Fulbaana 29,2019) Dargaggootni Oromoo Godina Jimmaa irraa Ayyaana Irreechaa Hora Finfinnee irratti argamuuf torban tokkoon dura Jimmaa irraa miilaan imalaa jiran yeroo ammaa Godina Shaggar Kibba-lixaa magaalaa Tafkiitti Alaabaa Oromoo qabatanii akka hin sossoone dhorkamuun isaanii barameera.
Dargaggootni kun yaada SBOf laataniin magaalaa Tafkii akka seenaniin Alaabaa kana qabatanii akka hin sossoone Humna Poolisii fi Kora bittinneessaa magaalaa sanaan dhorkamuu nuu ibsan.
Dhimma kana adda baasachuuf gara bulchiinsa/kantiibaa magaalaa Tafkiittis dhaqanii iyyatanii, “Qaama hidhate kana kan ajaju nu miti; isaaniin kan ajaju qaama biraa ti; kan Alaabaa kana akka hin qabanne isin dhorke nu miti.” ittiin jechuu isaaniillee nuuf himanii jiran.
Wayta Alaabaa keenya Oromiyaan hafnaan waltajjii idil addunyaa kan akka Isportii irrattuu yeroo ammaa ol kaasamee addunyaaf mul’isamaa jiru kanatti dargaggoota kanaan Alaabaa kana hin qabatinaa jedhanii dhorkuun of wallaaluu yo ta’e malee hiika biraa hin qabu. Alaabaa kana dhorkuuf yaaluunis ibidda qabsiisuu waan ta’eef qaamni tarkaanfii akkanaa fudhatu ummata miira hin taane keessa galchuu irraa of haa qusatu jenna.
Hireema kanaan Atileet Siifan Hassan kan kaleessa Waltajjii Ispoortii Idil Addunyaa irratti fiigicha dubartootaa mo’achuun Alaabaa Oromoo ol kaastee mul’iste galateeffanna.
Qeerroo Jimmaa Irreechaaf Imalaa turani. Adeemsi Kaayyoo Qeerroo fi Qarree keenyaa #Magaala Jimmaa irraa gara finfinneetti imalaa turan #Guyyaa kaleessaa Tulluu boolloo gahqnii turan. Guyyaa Har’aa Alaabaa Oromoo; Kan Wareegamni hedduun itti kaffalamee har’a gahe Diimaa Magariisa Diimaa gidduun Urjii fi Asxaa mataa isaa qabu Alaabaa ABO qabattanii hin adeemtani jechuun Kibba Lixa Shaggar naannoo #Tafkii jedhamutti poolisiin Oromiyaa deemsa dhorkee jira.
Qeerroon #Tafkii fi Warri #Sabbataa dgiyeenyatti jirtan haa birmannuuf.
Alaabaa keenya, Ibsituu keenya Qabannee bahuu fi biyya keenya keessatti itti fayyadamuuf Duubatti hin Jennu.
Gowwaan hamma itti fakkaatu hojjeta, Oromoon immoo kaleessas har’a waan godhu beeka. Qeerroo, Qarree fi Uummatni oromoo………
alaabaa adda bilisummaa oromoo qabattanii hin deemtan jechuun naannoo tafkiitti polisoonni oromiyaa ijoollee dararaa jiru
taateen biraa halkan alaabaa abbaa gadaa qeerroon magaalaa sabbataatti guyyaa kaleessaa hidhaa oolte qaamni hin beekamne kukkutee buusee bule
alaabaa abbaa gadaa ni kukkutu
alaabaa adda bilisummaa oromoo akka qabatanii hin darbine dhorku
Masaraan mootii abbaa jifaar alaabaa oromootiin akkanatti miidhaga.
Kana booda alaabaan diinaa qe’ee oromoo keessatti hin mirmirfamu.